Ciidamada ammaanka ee dowlad-goboleedka Puntland ayaa lagu soo warramayaa in ay dileen in ka badan 60 al-Shabaab ah isla markaana dhawr aag ka qabsadeen xagjiriinta laba maalmood oo dagaal adagi ku dhex maray aagga buuraha Galgala oo bariga 50 kiiloomitir uga beegan magaalada dekedeedka Boosaaso.
Ciidamada ayaa u awood sheegtay argagixisada, iyagoo nolol ku qabtay tobaneeyo ka tirsan horjoogayaasha al-Shabaab oo uu ku jiro Mukhtaar Cabdinuur Axmed oo loo yaqaan Axmed Gurey iyo Axmed Cabdi Maxamed. Ciidanka ayaa sidoo kale argagixisada ka xorreeyay dhawr goobood, sida Gurixoor, Dhagahdher, Guri Dharkeyn iyo Diin Digle oo ahayd gabbaadka ugu weyn ee al-Shabaab, taas oo 37km kaga beegan dhanka tuulada Galgala. Hawlgallo xiriir ah oo lagu nadiifinayo haraaga al-Shabaab ee ku harsan buuraha Galgala ayaa haatan socda.
Puntland ayaa sanadkii tagay weerarkii ugu horreeyay ku qaadday goobaha ay Shabaabku ku dhuuntaan eek u yaala buuraha Galgala iyo silsiladda Golis. Hoggaamiyaha Shabaabka aaggaas, Sheekh Maxamed Saciid Atam, ayaa isla sanadkii tagay isku dhiibay dowladda, isagoo ugu baaqay dhalinyaradii uu qalday in ay toobad keenaan oo ay joojiyaan dhibaatada ay ku hayaan dadkooda iyo dalkooda hooyo.
Weerar dhanka cirka ah oo lagu dilay madaxii sirdoonka al-Shabaab
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay in 29kii bisha December weerar dhanka cirka ah lagu dilay Cabdishakur Tahlil oo ahaa sarkaal sare oo al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca sirdoonka.
Weerarka lagu dilay Tahliil iyo horjoogeyaal kale oo al-Shabaab ka tirsan ayaa waxuu ka dhacay meel u dhow deegaanka Saakow ee gobolka Jubbada dhexe oo 500km u jirta magaalada Muqdisho. Dilka Tahliil oo al-Shabaab u qaabilsanaa howlgallada gudaha ayaa waxaa la filayaa in uu wiiqi doono fulinta weerarrada ay kooxda uga soo horjeeddo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Dilka Tahliil ayaa imanaya afar isbuuc kadib markii duqeyn cirka ah lagu dilay Axmed Cabdi Godane, hoggamiyihii hore ee al-Shabaab, iyo saddex maalmood kadib markii madaxii hore ee sirdoonka al-Shabaab, Zakariye Ismaaciil Axmed Xirsi, uu isku dhiibay ciidamada dowladda. Halkaas waxaa ka cad in ururka aragagixisada al-Shabaab uu gabalkoodii dhacay, iyaguu madaxdoodii ay noqdeen kuwa isdhiibay iyo kuwa la dilay, taas oo soo dedejin doonta burburkii kama dambeysta ahaa ee ururka argagixisada ah.
Ciidanka Xoogga Dalka oo argagixisada ka xorreeyay degaanka Daynuunaay
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab laga saaray deegaanka Daynuunaay oo 45 km u jirta magaalada Baydhabo kaddib markii halkaas uu dagaal ku dhex maray ciidanka dowladda iyo argagixisada.
Al-Shabaab ayaa muddadii ay haysatay deegaanka waxay carqaladeysay isu-socodka gaadiidka ee magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Sarkaalka ayaa sheegay inay haatan deggan tahay xaaladda magaalada, isla markaana uusan jirin wax khasaare ah oo ciidankooda ka soo gaaray dagaalka.
Shacabka ku dhaqan Daynuunay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in iyagoo dabaaldegaya ay isa soo tubeen jidadka degaankaas, qaarkoodna ay caano iyo haddiyado kala duwan guddoonsiinayeen ciidamada dowladda ee degaanka ka xorreeyay argagixisada arxanka daran.
Ciidamada dowladda ayaa dib-u-bilaabay hawlgalladii dalka looga sifeynayay haraadiga ururka argagixisada ah, iyadoo kal hore argagixisada laga saaray degaanno badan sida magaalooyinka Kismaayo iyo Baraawe oo uu dakhli aad u badan ka soo gali jiray.
Al-Shabaab oo baadigood ugu jirta halkii ay foodda saari lahaayeen
Ururka argagixisada al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in ay talo ku caddaatay oo ay garan la’yihiin sidii ay wax u maareyn lahaayeen kadib markii ay ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay sii labajibaareen hawlgallada argagixisada looga sifeynayo dalka.
Waxaa muuqata in la joogo waqtigii aargoosiga iyo la xisaabtanka, iyadoo argagixisada laga goynaya dambiyadii ay umadda ka galeen sida dilalka, afduubka, guurka qasabka ah ee gabdhaha yaryar, qaraxyada lala beegsado meelaha ay shacabku ku badan yihiin iyo falal kale oo liddi ku ah bani’aadannimada.
Hoggaanka ururka ayaa sii kala furfurmaya, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo lunsashada hantidii ay xaaraanta ku heleen iyo guud ahaan guuldarrada soo wajahday. Horjoogeyaasha al-Shabaab ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay maleeshiyooyinkooda ku amreen in hubkooda duugtaan oo ay dadka ku milmaan si ay naftood u badbaadiyaan, laakiin taas kuma badbaadayaan oo dadka waa laga yaqaanaa waana la soo qabandoonaa. Sida kaliya oo ay ku badbaadi karaan waa iyagoo ciidamada dowladda isku soo dhiiba oo dadkii ay dhibaateeyeenna cafis weydiista.